पाल्पाको दोभान र मस्याल क्षेत्र कमजोर बन्दै : भूगर्भविद !! — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, राजनीति, विशेष, समचार, स्वास्थ्य → पाल्पाको दोभान र मस्याल क्षेत्र कमजोर बन्दै : भूगर्भविद !!
पाल्पाको दोभान र मस्याल क्षेत्र कमजोर बन्दै : भूगर्भविद !!
December 25, 2015४७८ पटक
पाल्पा, पुस १० – चुरे र महाभारतको जोर्नी परेकाले पाल्पाको दोभान, मस्याम लगायतका क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको भूगर्भविदको अध्ययनले देखाएको छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गको चिडियाखोलादेखि डुम्रेको झण्डै १८ किलोमिटर क्षेत्रमा बढी पहिरो खस्ने, ढुंगा खसेर वर्षेनी मानवीय क्षति हुने पनि यही कारण भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
त्रिचन्द्र क्याम्पस काठमाडौं भुगर्भ विभागका प्राध्यापक, डाक्टरको टोलीले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । प्राध्यापक डा. सुवोध ढकाल, प्रा.डा. प्रेमबहादुर थापा, जापानी भूगर्भशास्त्री प्रोफेसर साकाई लगायतले गरेको अध्ययनले यस्तो पुष्टी गरेको हो ।
चुरे र लेसर हिमालयका साथै महाभारत क्षेत्रमा डोलोमाइटमा छ । यही क्षेत्रमा चुरे र महाभारतको जोर्नी पर्छ । त्यसैले पनि यो क्षेत्र कमजोर बनेको हो । प्राध्यापक डा. ढकाल भन्नुहुन्छ ‘यस क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र भूकम्पको खतरा बढी रहेको छ ।’
असजिलो खालको संरचना र मानवसँगको सम्बन्धलाई हेर्दा पनि यो क्षेत्रमा बढी क्षति हुने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले त्यसैले पनि यस क्षेत्र भूगर्भशास्त्रीको अध्ययनकालागि उपर्युक्त थलो भएको बताउनुभयो ।
नेपालबाट मात्र होइन, विदेशबाटसमेत यस क्षेत्रको भूगोलका विषयमा अध्ययन गर्न आउने गर्छन् । जापानी प्रोफेसर साकाईले यस क्षेत्रको भूगोलका विषयमा पिएचडी नै गर्नु भएको छ । उहाँ जस्ता धेरैले आएर अध्ययन गरेका छन् ।
अध्ययनपछिका केही निष्कर्ष बाहिर आएपनि अधिकांश प्रतिवेदन र सोधपत्रमै थन्किएका छन् । यहाँ २२ वर्षदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पसको बिएस्सी अन्तिम वर्ष भूगर्भ विभागबाट विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्नसमेत ल्याउने गरिन्छ ।
बिएस्सी चौथो वर्षका विद्यार्थी संजीव थापाले भन्नुभयो ‘तिनाउ र डुम्रे खोलामा पहिरो कसरी गएछ ? भुक्षय हुनुको कारण ? पहिरो जानुको कारण ? पहिरो कति लामो छ ? कति चौडाईमा गएको छ ? कस्तो ढुंगा माटोले पहिरो खसेको रहेछ ? कस्ता ढुंगा छन् ? बलिया छन् कि नरम ? यी र यस्तै कुराको व्यवहारिक अध्ययन गर्दैछौ ।’ उहाँले तिनाउ खोला र यहाँ गएका पहिरोको अध्ययनले व्यवहारिक ज्ञान दिएको बताउनुभयो